Maxaa kahor taagan Soomaaliya inay yeelato Ciidan Tayo leh? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa kahor taagan Soomaaliya inay yeelato Ciidan Tayo leh?
Ciidamada ay dharaar walba tiradoodu siyaadeyso ayaa weli u muuqda kuwa aan si buuxda gacanta ugu dhigi karin amaanka dalka, kaasoo ay joogaan xooggag nabad ilaalin ah oo Midawga Afrika ka socda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa soo badanaya dhalinyarada daneynaysa kamid noqoshada Ciidamada qaranka, iyadoo dugsiyadda tababaro ay soo buux dhaafiyeen da'yar cusub oo la diiwaan galinayo.
Waxaa sanad kasta askarta qalib-jebisa tiradoodu u dhaxeyso 4 kun ilaa 5 kun, waxaana weli gudaha dalka ka dhacaya falal argagixisada iyo amni daro baahsan oo mas'uul ka tahay kooxda Al-Shabaab, oo tiro ahaan aad uga yar Ciidanka DF iyo kuwa AMISOM.
Ciidamada ay dharaar walba tiradoodu kordheyso ayaa weli u muuqda kuwa aan si buuxda gacanta ugu dhigi karin amaanka dalka, oo hadda hoostaga Ciidanka Midawga Afrika ka socda.
Qubarada arimaha amniga ayaa sheegaya in dhowr sabab ay keeneyso in la waayo Ciidan qaran oo leh cududdii iyo tayadii laga doonayay, waxaana ay soo xiganayaan arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, iyo nidaamka qabiilka ee askarta iyo Saraakiisha lagy qoro.
Waxay tilmaameen in ay aad u yar yihiin lacagaha ay qaataan askarta, waxaana kuwa Saraakiisha ugu sareysa la siiyaa 3-boqol Dollar, halka kuwa darajadoodu hooseyso ama darajada la'aanta ah ay qaataan wax ka yar 2-boqol oo Dollar, taasoo ah mid aan dabooleynin baahidooda, islamarkaana aan u dhigmin dhaqaalaha la siiyo Ciidanka AMISOM, oo askar kasta oo $1,228 qaato bil walba.
Sababta kale ayaa ah in askariga loo baahan yahay oo keliya marka uu Caafimaad qabo, iyadoo la dayaco kolka uu dhaawacmo, waxaana xilliga uu geeriyoodana jirin gunno la siinayo qoyskiisa, ama aas qaran oo lagu maamuusayo howshii uu qaranka u soo qabtay. Waxay tani niyad jebisay Ciidanka oo dhan.
Hoos u dhaca tayada Ciidamadda ayaa dhanka kale loo aaneeyaa nidaamka qabiil ee Soomaaliya, taasoo askariga ku qasbeysa inuu ku daabnaaddo jufada uu ka soo jeedo ama maamul Goboleedka, waxaana kuwa la qorayo ama tababarka loo qaadayo qaarkood lagu xujeeyaa inuu la yimaado Xildhibaan ama siyaasi ay isku reer yihiin oo dammiin ka noqda, waana tan lumineysa inuu dalku yeesho Ciiidan quwad leh oo baacsan kara Kooxda Al-Shabaab.
Dowladaha Turkiga, Mareykanka iyo kuwa kale oo Soomaaliya ka taageera arrimaha dib u dhiska Ciidamadda, islamarkaana dhaqaalaha badan ku bixiya ayaa dhowr jeer arrintan walaac badan ka muujiyey, iyadoo lacagta ay beesha caalamka Soomaaliya ku bixiso loogu tala-galay la dagaalanka argagixisada.
Si kastaba, argagixisadda Al-Shabaab ayaa nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya khatar ku hayay tan iyo 2008-dii, markaasoo qaab qarsoodi loogu aas aasay Muqdisho, waxaana Kooxdu ay ka arimisaa degaanno u badan meelaha miyiga ah, iyagoo si buuxda inta badan gacanta ugu haya Gobolka Jubadda dhexe.